Blog - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဇြန္လ 16, 2021 ဇြန္လ 14, 2021 Mohsin Noman	မှတ်ချက် Leave
How can you paint your car? For many drivers, painting your car yourself isachallenge. A challenge they want to take up out ofataste for manual work and customization. A real hobby. For others, repainting their car is also and above all an economical solution.
How to prepare and paint your car?
For many drivers, painting your car yourself isachallenge. A challenge they want to take up out ofataste for manual work and customization. A real hobby. For others, repainting their car is also and above all an economical solution. “I don’t pay forabody to do it, and my car doesn’t stand still.”
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 16, 2021 ဇြန္လ 14, 2021 arina michel	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဝယ်ယူသည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုအခြားစျေးကွက်ပြိုင်ဘက်များနှင့် ၁၀ ဆနှိုင်းယှဉ်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်ကြိုးစားသည်။ မတူညီသော software ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်ဘလော့ဂ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ကြသော်လည်းတစ်စုံတစ် ဦး အားယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသောအချိန်တွင်ကြုံတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုအဆုံးသတ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဘလော့ဂ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဘလော့ဂ်များကိုစာရင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 16, 2021 ဇြန္လ 15, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိသားစုများစွာအတွက်သီးခြားဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည့်ခေတ်တွင်နေထိုင်သည်။ ဤမသေချာမရေရာသောအချိန်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိလူများစွာအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများကိုဖြစ်စေသည်။ ယခုသင့်မိသားစု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအချိန်ကာလတစ်ခုသည်မိသားစု ၀ င်များ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်မိသားစုအစီအစဉ်တွင်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤတွင်သင့်မိသားစုနှင့်အတူသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောလက်တွေ့ကျသောလုပ်ရပ် ၃ ခုရှိသည်။
ဇြန္လ 15, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 Raj Marwal	မှတ်ချက် Leave
အောင်မြင်သောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများအားသစ္စာရှိရှိဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းထက်ပိုသည်။ အမှန်တရားကမင်းမှာခိုင်မာတဲ့အရာတစ်ခုလိုတယ် အီးမေးလ်စျေးကွက် ဘောလုံးကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေရန်နည်းဗျူဟာ။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းမှာအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရောင်းဝယ်မှုဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 15, 2021 ဇြန္လ 13, 2021 Aliana Baraquio	မှတ်ချက် Leave
ဖခင်များနေ့ကိုဖခင်တစ် ဦး ပေးဖို့တစ်ခုခုစဉ်းစားဖို့ခက်သလား။ သူ့ကိုသူ့ကိုရှပ်အင်္ကျီတွေ၊ ကောင်းပြီ၊ အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့အချိန်တန်ပြီ၊ ပြီးတော့သူထိုက်တန်တဲ့အရာတွေကိုပေးပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 15, 2021 ဇြန္လ 14, 2021 မာရှယ်ဖရန့်	မှတ်ချက် Leave
"သေနတ်များကလူကိုမသတ်ဘူး၊ လူတွေကလူတွေကိုသတ်တယ်" ဟူသောကြော်ငြာကိုမည်သူမဆို ၀ င်ရောက်ရေးသားသူမည်သူမဆိုအမှန်အကန်ဖြစ်သည်။
သေနတ်နှင့်ဆက်စပ်သောရာဇ ၀ တ်မှုများမှာခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င် ၀ ယ်ယူသောသေနတ်များဖြစ်သည်။ နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများသည်သေနတ်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုစစ်ဆေးမှုများသည်ဥပဒေကိုလိုက်နာသောလူများပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများမှတစ်ဆင့်အကြမ်းဖက်ရာဇ ၀ တ်သားများသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမမာဖြစ်နေခြင်းကိုရှားရှားပါးပါးတွေ့ရှိရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူမည်းဈေးကွက်သေနတ်လုပ်ငန်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုရည်ရွယ်ချက်ရှိသူများအတွက်အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေနတ်ပစ်မှုများသည်အမေရိကန်များအားဆက်လက်အကြမ်းဖက်နေသည်။
ဇြန္လ 14, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
၎င်းကိုနှစ်စဉ်နေရာတိုင်းတွင်တစ်မျိုးသို့မဟုတ်တစ်မျိုးကျင်းပကြသည်။ ပွဲတော်များနှင့်ပွဲတော်များမှသည်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများအထိ၊ ဘာသာရေးဝတ်ပြုမှုနှင့်နေ့လည်စာများသို့နှစ်စဉ်ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်အထက်ဖော်ပြပါအခမ်းအနားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်မကသည်“ Juneteenth” အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် Juneteenth ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဘယ်နှစ်ယောက်တကယ်သိပြီးဘယ်ကြောင့်ကျင်းပရတာလဲ။ Juneteenth နောက်ကွယ်ကအမှန်တကယ်သမိုင်းကဘာလဲ? လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတကွစုရုံးဖို့နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလား။ juneteenth.com ဝက်ဘ်ဆိုက်အရ“ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျွန်စနစ်အဆုံးသတ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁၉ နှစ်မြောက်အထင်ရှားဆုံးသောတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်” ဒါဟာအလုံအလောက်ရိုးရှင်းအသံ? သို့သော်လေးစားဖွယ်ကောင်းသောကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်နှင့်တန်းတူညီမျှမှုထောက်ခံသူ Greshun De Bouse က၎င်းထက်ပိုမိုသောအရာများရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဇြန္လ 14, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 Rayanne Morriss	မှတ်ချက် Leave
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားမှုသည်ဖောက်သည်အသစ်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးသည်ပိုမိုမြင့်မားသော ၀ ယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်၎င်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ရမည်။ ဤသည်သံသရာဖြစ်ပြီးပိုမိုထိရောက်သောစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုကိုစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုထိရောက်အောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသေချာပါကဤအကြံပြုချက်များကကူညီနိုင်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 14, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 Maryn Mcdonnell	မှတ်ချက် Leave
လူတိုင်းသည်အိမ်ပိုင်ဆိုင်ရန်စိတ်ကူးယဉ်ကြသည်၊ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဘတ်ဂျက်၊ ဒီဇိုင်း၊ အရွယ်အစားစသဖြင့်အချက်များစွာကိုစဉ်းစားရန်လိုသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည်သင်၏အိပ်မက်အိမ်ကိုဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ၀ ယ်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်များဟုလူသိများသည့်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရယူနိုင်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 14, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 ဗစ်တိုးရီးယားစမစ်	မှတ်ချက် Leave
အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုပြင်ပတွင်ထင်ဟပ်စေရန်အတွက်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းအပေါ်မည်မျှကောင်းမွန်ကြောင်းကိုပြသရန်နည်းလမ်းများကိုအမြဲရှာဖွေနေသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသော moisturizer ရှာဖွေခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ် anti-aging သွေးရည်ကြည်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်မိတ်ကပ်အလွှာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာမကုန်ဆုံးနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်နှင့်အခြားမိန်းမများတပ်မက်သည့်ငယ်ရွယ်သောအသွင်အပြင်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ပိုမိုရိုးရှင်းသောနောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာသင့်တော်သည့်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အနေဖြင့်သင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်သင်ယူနိုင်သောအရေးကြီးဆုံးဖြည့်စွက်ချက်ငါးခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သို့မှသာသင်သည်နုပျို။ ကျန်းမာစေနိုင်သည်။
ဇြန္လ 13, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 ဗစ်တိုးရီးယားစမစ်	မှတ်ချက် Leave
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လည်ပတ်နေသောကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောမူဝါဒများကြောင့်လူသိများပါက၎င်းသည် ပို၍ မှန်ကန်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ရန်ထိရောက်သော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစိမ်းလန်းသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။ သင်၏ eco-friendly စီးပွားရေးအတွက်အောင်မြင်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်ပြီးမြောက်စေလိုသည့်အရာကိုသင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
ဇြန္လ 13, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 Louis rolen	မှတ်ချက် Leave
Web hosting သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သုံးစွဲနိုင်မှုသေချာစေရန်အတွက်အခြေခံနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏မဆိုမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ဝက်ဘ် hosting သည်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်လူတို့၏အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ VPS နှင့် cloud hosting သည်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုသာရှိသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 13, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 Sheryl Wright	မှတ်ချက် Leave
နွေရာသီဟာအားကစားအသစ်တစ်ခုကိုထွက်ပြီးစမ်းကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနှစ်ပါပဲ။ နွေရာသီလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သောအသင်းအားကစားများစွာရှိသည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်ကစားခြင်းသည်မတူညီသောအားကစားတစ်ခု၏အဝင်များနှင့်အပြင်များကိုလေ့လာရင်းသူငယ်ချင်းအသစ်များရရှိရန်အခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မည်။ ဤအသင်းအားကစားများတွင်ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဤနွေရာသီကို ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 13, 2021 ဇြန္လ 11, 2021 Robert Moment	မှတ်ချက် Leave
သင်သည်ထောင်နှင့်ချီသော ၀ န်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုစီမံခြင်းရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ သင်မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာရှိရန်လိုအပ်သည်။
မန်နေဂျာတစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်သည်သင့်အသင်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သုတေသနတွေ့ရှိချက်အရမြင့်မားသော EQ သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်စွမ်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့သည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်ရမည်။
ဇြန္လ 12, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
ဇွန်လ ၁၃ ရက်သည်အချို့သူများအတွက်နောက်တစ်ရက်မျှသာဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ထွန်းသစ်စ Grand Hustle ရက်ပ်၏ဂီတအနုပညာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိကျွမ်းသူများစွာအတွက်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ Doe B ဟုနာမည်ကြီးသော Glenn Thomas သည် Montgomery ဖြစ်ပြီးသူမကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးသည့်မျက်လုံးခတ်ခြင်း၊ နာမည်ကြီး Rapper TI နှင့်ဂီတပူးပေါင်းခြင်းနှင့် TI ၏အတ္တလန်တာအခြေစိုက် Grand Hustle တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းခံရသည့် Montgomery ဖြစ်သည်။ သူသည် MTV၊ BET နှင့် 13 & Park တို့တွင်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် Doe B သည်သူ၏ဇာတိမြို့ Montgomery, AL ရှိ Centennial Hill Bar & Grill တွင်သေဆုံးသည်။ ဤသည်နှင့်လာမည့်ဂီတဖြစ်စဉ်ကိုသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ပရိသတ်များကသိပ်မကြာခင်တွင်ယူဆောင်လာသည်ဟုဆိုကြသည်။ Vibe မဂ္ဂဇင်း၏အဆိုအရ rapper TI သည်အသုဘတွင် Doe B အကြောင်းပြောရန်ဖြစ်သည်။
ဇြန္လ 12, 2021 ဇြန္လ 12, 2021 rahat ahmed	မှတ်ချက် Leave
ဒါလုပ်ခဲ့တယ် မိုဟာမက် Ashraf Uddin လူမှုမီဒီယာကမ်ဘာပျေါတှငျနာမည်ကြီးအမည်။ ထိပ်တန်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဂီတပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံကောင်းများစွာကိုသယ်ဆောင်လာခြင်းမိုဟာမက်အက်ရှာဖ်အဒ်ဒင်သည်လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့် ၀ င်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိရန်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်စပါးကျီမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်အခြားသူများမှအတူတူပင်ဖြတ်သန်း။ သူသည်သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန်သူ၏အိပ်မက်ဖြစ်ပြီး Ashraf ကိုနောက်ပြန်လှည့်မကြည့်တော့ပါ။
ဇြန္လ 12, 2021 ဇြန္လ 11, 2021 သူ Mike Parsons	မှတ်ချက် Leave
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကစပြီးပညာရေးပညာရှင်များစွာသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝပညာရေး၏အရေးပါမှုအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သင်စဉ်းစားကြည့်ပါလေ၊ ၎င်းသည်မိဘများအားလုံးသတိထားရမည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကကလေးဘဝပညာရေးသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းနှင့်မိဘတစ် ဦး အနေဖြင့်မည်ကဲ့သို့ကူညီနိုင်မည်ကိုလေ့လာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေထိုင်ပါ။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သောအရာများအားလုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီးပျော်မွေ့ပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 12, 2021 ဇြန္လ 11, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
Superfoods သည်ကျန်းမာနေစေရန်ခန္ဓာကိုယ်မှလိုအပ်သောအာဟာရများစွာပါ ၀ င်သည့်အစားအစာများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ခန်ဓာကိုယ်နှင့်သူ့ခန်ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သောအာဟာရ၊ စွမ်းအင်နှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများရှိသောအစားအစာတစ်ခုမျှမရှိပါ။
ယူအက်စ်အစားအသောက်လမ်းညွှန်ချက်များအရလူတို့သည်ကျန်းမာသောအစားအစာပုံစံများကိုစားသုံးသင့်ပြီးအစားအစာအုပ်စုအားလုံးမှအစားအစာများကိုစားသုံးသင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, Superfoods သူတို့ရဲ့အာဟာရအကျိုးကျေးဇူးများကိုအထူးအထူးအသိအမှတ်ပြုခံရကြသည်။ အောက်တွင်သင်၏အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်အချို့သော superfoods များစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
ဇြန္လ 11, 2021 ဇြန္လ 11, 2021 Mila Jones	မှတ်ချက် Leave
ပြောင်းလဲမှုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲတိုင်းနှင့်အတူ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုထိရောက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားခံယူ။ မကြာသေးမီကစီးပွားရေးရှုခင်းအပြောင်းအလဲသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကာကွယ်ဆေးထုပ်ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ဆေးများကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်ဂြိုလ်တုနေရာသို့ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပကာကွယ်ဆေးထိုးဆေးခန်းတစ်ခုဖြစ်စေဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကာကွယ်ဆေးများကိုစိတ်ချရသောနေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပါဖြစ်စေကာကွယ်ဆေးများကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဇြန္လ 11, 2021 ဇြန္လ 11, 2021 Louis rolen	မှတ်ချက် Leave
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များစွာပါဝင်သည်, ထိုအဆင့်တစ်ခုစီသည်ရုပ်ရှင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏အဆင့်တိုင်းတွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်တစ်ခုထည့်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တီထွင်ဖန်တီးမှုသည်အောင်မြင်မှုအဆင့်ကိုဖော်ပြသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်ဖြစ်သည်။
ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဒြပ်စင်များမပါ ၀ င်လျှင်အဆင့်တစ်ခုစီကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုအားလုံးသည်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာများကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်မဟုတ်ပါ; ဒါထက်ပိုပါတယ် သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်လည်းအရေးကြီးသည် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှု.
ဇြန္လ 11, 2021 ဇြန္လ 10, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
သင်၏ကလေးများအတွက်လက်ဆောင်များရယူရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏သမီးအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဝယ်ယူလျှင်သင်၏သမီးကနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်ကိုလှုံဆော်ပေးနိုင်သည့်အတွေးအခေါ်အချို့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
1 ။ ရှေငှေကြောကျမကျြရတနာ
လက်ဝတ်ရတနာသည်အမြဲတမ်းသင်၏သမီးအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး ရှိသည်ဖို့စိတ်ကြိုက်အခါကပင်ပိုကောင်းတယ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို။ မင်းရဲ့သမီးကနားရွက်ကိုထိုးဖောက်မရသေးဘူးဆိုရင်မင်းနားကိုဖောက်ပြီးနားကပ်အချို့ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ယူဖို့မင်းသူ့ကိုခေါ်သွားမှာပါ။ အကယ်၍ မင်းကသူမကိုလည်ဆွဲရဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်မင်းကဆွဲကြိုးရဲ့နောက်ကျောမှာစာတစ်စောင်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ လက်ဝတ်ရတနာနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းဘယ်တော့မှမှားမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကမင်းရဲ့သမီးကိုတစ်ခုခုပြောတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဇြန္လ 11, 2021 ဇြန္လ 10, 2021 Sheryl Wright	မှတ်ချက် Leave
ဥပဒေဆိုင်ရာအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုသည်ဥပဒေနှင့်၎င်း၏လျှောက်လွှာများပေါ်တွင်အခြေခံသည့်အလုပ်များဖြစ်သည်။ ရှေ့နေများ၊ ဖျန်ဖြေသူများ၊ တရားသူကြီးများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများပါ ၀ င်သည်။ ထုံးစံအရတရားဝင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည်ခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိစိန်ခေါ်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေးအရအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဥပဒေရေးရာကဏ္inတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရန်စီစဉ်သောအခါ၊ စေ့စပ်သေချာစွာသုတေသနပြုသင့်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 11, 2021 ဇြန္လ 10, 2021 ဗစ်တိုးရီးယားစမစ်	မှတ်ချက် Leave
အိမ်ထောင်စုငွေတောင်းခံများကသင်လစဉ်ပေးရမည့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်အတန်ရှိသည်။ ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နည်းတစ်နည်းမှာအိမ်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်သင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်နည်းဗျူဟာအချို့ရှိသည်။
တံခါးနှင့် Windows ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ
ခေတ်မီဆန်းပြားသည့်အပူနှင့်အအေးခံကိရိယာများကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည်ငွေတောင်းခံလွှာများကိုလျှော့ချရန်များစွာအထောက်အကူပြုသော်လည်းသင်၏ ၀ င်းဒိုးအခြေအနေသည်ဤကုန်ကျစရိတ်များကိုမည်သို့ပံ့ပိုးပေးသည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ သင့်ရဲ့ ၀ င်းဒိုးရဲ့အခြေအနေကအပူနဲ့အအေးပေးမှုကိုသိသိသာသာတိုးစေနိုင်တယ်၊ ပြတင်းပေါက်များနှင့်တံခါးများအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းသည်စျေးကြီးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းစွမ်းအင်ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသူများအတွက်လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းကိုလဲလှယ်ရန်စဉ်းစားပါ။
ဇြန္လ 10, 2021 ဇြန္လ 10, 2021 John Harry	မှတ်ချက် Leave
ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသည်များမကြာမီကဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အပြောင်းအလဲများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်နှင့်သူတို့၏ဖယောင်းတိုင်ထုတ်ကုန်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သူတို့သည်ယနေ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောဖယောင်းတိုင်လုပ်ငန်းတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အထောက်အကူပြုမည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ဤဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လူကြိုက်များမှုကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုအောင်မြင်စွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကထုံးစံကိုသုံးတယ် ဖယောင်းတိုင်သေတ္တာများ ဆွဲဆောင်ဖယောင်းတိုင်သူတို့ရဲ့အကွာအဝေးထုပ်ပိုးရန်။
ဇြန္လ 10, 2021 ဇြန္လ 9, 2021 ဂျူလီဝီလီ	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါပြိုင်ဆိုင်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်မြင့်တက်နေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်အတူတက်လာပြီးသူတို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့်ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်အပေါ် မူတည်၍ စမတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုရေးဆွဲနေသည်။ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုကတော့ online ရှိနေခြင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။
အမှတ်တံဆိပ်သည်သူတို့၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်သူတို့၏ထူးခြားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုတိုးချဲ့ရန်လိုအပ်သည်။ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းတစ်နည်းမှာမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာ feeds တွေကို အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
ဇြန္လ 10, 2021 ဇြန္လ 9, 2021 Matt Thurston	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာကြီးသည်ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါသင်၏အချက်အလက်များသည်လည်းပိုမိုများပြားလာသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များ၏အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ google cloud ဝန်ဆောင်မှုများကို သုံး၍ သင်၏ဒေတာများကိုတစ်နေရာတည်း၌တစ်နေရာတည်းတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့်အသုံးချခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဟက်ကာများ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောခြိမ်းခြောက်မှုသည်သင့်အားတုန်ခါနေပြီ၊ သင်၏အွန်လိုင်းအချက်အလက်များကိုသော့ခတ်ထားသောဂူဂဲလ်တိမ်တိုက်အားနည်းလမ်းငါးခုဖြင့်ကြည့်ပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 10, 2021 ဇြန္လ 9, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
စီးပွားရေးလောကတွင်“ အသင့်တော်ဆုံးအတွက်ရှင်သန်ခြင်း” ဂါထာသည်နေ့စဉ်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်လူများစွာသည်သူတို့၏လုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဟုဆိုလိုသည်။ စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသည်ရှေ့ဆက်နေရန်နှင့်ဖောက်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုတည်ရှိနေခြင်းကိုမှုန်ဝါးစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာအကြံဥာဏ်တစ်ခုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုသည်သင်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးအားသာချက်များကိုသိရှိပြီးစမတ်ဗျူဟာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်သင့်အားအပြိုင်အဆိုင်ရှေ့သို့အမြဲ ဦး ဆောင်နေလိမ့်မည်။ ဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဇြန္လ 9, 2021 ဇြန္လ 8, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
၁။ Hold Services မှ ၀ ယ်သူ
သင်၏ခေါ်ဆိုမှုများဖြေကြားရန်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတစ်စုံတစ် ဦး ကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်သင်၏ဖောက်သည်များသည်စောင့်ဆိုင်းချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း။ အဖြေကရှည်လွန်းမနေသင့်ဘူး သူတို့စောင့်နေတုန်းမှာသူတို့ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်အလက်တွေပေးတဲ့ပရိုဂရမ်နဲ့ဆက်သွယ်သင့်တယ်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အနာဂတ်နှင့်သူတို့အတွက်ဘာလုပ်နိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်များဖြစ်နိုင်သည်။
ဇြန္လ 9, 2021 ဇြန္လ 8, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
သင်၏ကားကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်သင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည့်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်ဈေးအသက်သာဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းကိုကောင်းမွန်သောဆေးကြောပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကအလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်းများအတွက်ကားတစ်စီးကိုဆေးကြောဖို့ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်ပေမယ့်ရာသီဥတုပေါ်မူတည်။ အိမ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းသောကားကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးကား၏အပြင်ပန်းတွင်စုဆောင်းနေသောအညစ်အကြေးများအားလုံးလမ်းပေါ်မှမဖယ်ရှားရန်ရေပုံးနှင့်ရေမြှုပ်ကိုထုတ်ပစ်ပါ။ အဝတ်လျှော်ပြီးသောအခါတွင်သင့်ကား၏အသွင်အပြင်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုတိုးတက်စေရန်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောအိမ်သုံးကားဖယောင်းပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းများရှိပါသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 9, 2021 ဇြန္လ 8, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
သင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်၏ပြောင်းလဲနေသောဤကမ္ဘာတွင်ရှင်သန်ရန်စိတ်ရှည်ခြင်း၊ စည်းကမ်းနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ယနေ့အချိန်တွင်ဖြတ်တောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၏စွမ်းအားဖြင့်သင်၏လုပ်ငန်းကိုထိပ်ဆုံး၌ထားရန်လိုအပ်သည်။ TikTok (သို့) Instagram ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ရဲ့အလားအလာရှိတဲ့ဖောက်သည်တိုင်းနေထိုင်တဲ့နေရာမှာအင်တာနက်ရှိနေတယ်။ သင်ရောက်ရှိတော့မည့်လူတိုင်းသည်သူတို့၏ဖုန်းသို့မဟုတ်လက်တော့ပ်တွင်ရှိနေကြပြီး၎င်းတို့ကိုထိထိရောက်ရောက်နှင့်ထိထိရောက်ရောက်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ဇြန္လ 8, 2021 ဇြန္လ 8, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
လေ့လာမှုများအရဂီတသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အခြေအနေနှင့်သာယာဝပြောမှုအပေါ်များစွာသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ ကခုန်ခြင်း၊ မျက်ရည်ယိုနေသောသီချင်းများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားကခုန်ခြင်းဖြစ်စေသောမကျေနပ်သောစည်းချက်များဖြင့်ဖြစ်စေဂီတသည်လူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ချစ်ရကြောင်းနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။
ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ဘ ၀ မှာတေးဂီတပိုများချင်ရင်ကော။ သင်ဟာအသည်းအသန်တေးဂီတဝါသနာအိုးဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်ဟာသင့်ဂီတအကျယ်ကိုကျယ်ပြန့်ဖို့ပဲကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေအောက်ပါအကြံပြုချက်များကကူညီနိုင်ပါတယ်။
ဇြန္လ 8, 2021 ဇြန္လ 8, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
ဘောလုံးပွဲတစ်ခုတွင်ဘောလုံးအသင်းသားတစ် ဦး စီသည်အနိုင်ရရန်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်အသင်းဖော်များနှင့်အတူတကွကြိုးစားသည်။ ဘောလုံးအသင်းကဲ့သို့သင်၏အလုပ်ခွင်အသင်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏မစ်ရှင်ကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရပြီးသတ်မှတ်ထားသည့်ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်ကြိုးစားရမည်။
သို့သော်အရေးအကြီးဆုံးမှာအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး အနေနှင့်အသင်း၏ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ကိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်သင်၏အားသာချက်များကိုသင်သိထားရမည်။ သင်၏အသင်းရည်မှန်းချက်များကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏အသင်းရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေရန်သင်အတူတကွလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 8, 2021 ဇြန္လ 8, 2021 McKenzie ဂျုံးစ်	မှတ်ချက် Leave
စုံတွဲတိုင်းသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ရငျးနှီးမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အတူတကွပျော်စရာကောင်းသောအရာများပြုလုပ်ရန်အချိန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ စုံတွဲများသည်ဒေသအတွင်းနှင့်ခရီးသွားရာတွင်အတူတကွအချိန်ဖြုန်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်။ သို့သော်ထိုအဖြစ်အပျက်များသည်လျင်မြန်စွာဈေးကြီးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်နေ့စွဲညတွင်နေရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်စုံတွဲတစ်တွဲ၏ရင်းနှီးသောအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ဒါ့ကြောင့်သင်နှင့်သင်၏အထူးတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်ပြည့်ဝစုံလင်သည့်ညစီစဉ်ထားပုံကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 7, 2021 ဇြန္လ 6, 2021 မင်းသမီး Emma Willson	မှတ်ချက် Leave
သင်ဝိုင်နီတစ်ခွက်ကိုသောက်သောအခါအချိန်တိုင်းတွင်၎င်းသည်မတူညီသောအရသာရှိသည်ဟုသင်ခံစားရပေမည်။ ဒီဟာကလေကောင်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ် ၀ ိုင်ပုလင်းတစ်လုံးဖွင့်လိုက်တိုင်း၎င်းသည်အောက်စီဂျင်အချို့ကိုစုပ်ယူပြီးအသက်ရှူစေသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဝိုင်သက်ရှိအရာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ '' ရှူ '' ဟူသောဝေါဟာရက၎င်း၏အစစ်အမှန်အဓိပ္ပာယ်အတွက်ရှူရှိုက်မိနှင့် exhale သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဝိုင်သည်အောက်စီဂျင်နှင့်ထိတွေ့ပါက၎င်းသည်၎င်း၏အရသာနှင့်အနံ့ကိုပြောင်းလဲစေသောဓာတုဓာတ်ပြုမှုများကိုခံယူသည်။
ဇြန္လ 6, 2021 ဇြန္လ 6, 2021 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
ဇွန် ၇ ရက်သည် National CAPHPACH DAY သို့မဟုတ် #CAPHPACHDAY (အသံထွက် cap ° pack) ဖြစ်ပြီးကြီးမားသောပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ #CAPHPACHDAY သည်ရဲနှင့်ပြည်သူတို့အကြားနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရဲ - ပြည်သူ့နှောက်ယှက်မှုနှင့်ရဲ - ပြည်သူရဲရဲနှောက်ယှက်မှုနှစ်ခုလုံးအားပပျောက်ရန်အရေးကြီးသည့်အချက်ကိုအသိပညာမြှင့်တင်ရန်စည်းလုံးညီညွတ်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ CAPHPACH သည်ရဲတပ်ဖွဲ့၏နှောင့်ယှက်မှုကိုဆန့်ကျင်သောနိုင်ငံသားများ၊ ရဲများအားပြည်သူ့နှောက်ယှက်မှုကိုဆန့်ကျင်သောအတိုကောက်ဖြစ်ပြီး # CAPHPACHDAY-7 ၏ရက်စွဲသည်အပြုသဘောဆောင်သောတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုဆိုလိုသည် - အမျိုးသား CAPHPACHDAY တွင်ဖော်ပြထားသောအတိအကျဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 6, 2021 ဇြန္လ 4, 2021 Sheryl Wright	မှတ်ချက် Leave
သင်သည်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ (CX) အကြောင်းစဉ်းစားသောအခါ၊ အစိုးရနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းကိုသင်များသောအားဖြင့်မစဉ်းစားပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံမှုဟာဖောက်သည်တွေအတွေ့အကြုံနည်းနေပုံရတယ်။ DMV တွင်ရှည်လျားစွာစောင့်ဆိုင်းခြင်း၊ IRS နှင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမြဲတမ်းပျက်ဆီးနေသောပုံများအားလုံးသည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
ဇြန္လ 5, 2021 ဇြန္လ 4, 2021 Rayanne Morriss	မှတ်ချက် Leave
သင်၏အိမ်နောက်ဖေးမှာထိုင်။ အနားယူရန်နှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုအားအပန်းဖြေရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်းများရှိပါကသင့်အိမ်နောက်ဖေးသည်လုံလောက်မှုမရှိဟုသင်ခံစားရပေမည်။ သင်ဖျော်ဖြေရန်စီစဉ်ထားပါကသို့မဟုတ်ပိုမိုရင်းနှီးသော setting ကိုလိုချင်ပါကသင့်အိမ်နောက်ဖေးကိုယခုအချိန်တွင်မသက်မသာခံစားမိနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာအနည်းငယ်ရှိသည်။
ဇြန္လ 5, 2021 ဇြန္လ 4, 2021 Sheryl Wright	မှတ်ချက် Leave
အောင်မြင်သောတက်တူးထိုးအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်အဘယ်အရာလိုအပ်ကြောင်းသင်စဉ်းစားဖူးသလော။ အကယ်၍ သင်စတူဒီယိုကိုဖွင့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်သင်သေချာပေါက်ရှာလိမ့်မယ်။ ထွက်လာသည်နှင့်အမျှအမှန်တကယ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရသည်မှာကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ အပ်နှံခြင်း၊ ဇွဲရှိခြင်းနှင့်စွမ်းရည်ပြည့်ဝခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ တွင်ပထမဆုံးဆိုင်ဖွင့်လှစ်သောတက်တူးအနုပညာရှင်များအတွက်အသုံးဝင်သောအချက် ၅ ချက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 5, 2021 ဇြန္လ 4, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
သင်သည်အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာရန်သင်၏အိမ်ကိုဝယ်ယူရန်၊ ငှားရန်သို့မဟုတ်တည်ဆောက်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အိမ်တစ်လုံးကိုသင်ဆောက်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ငှားသည်ဖြစ်စေ၊ ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေအချက်အလက်များစွာ၏လွှမ်းမိုးမှုခံရသည်။ အိမ်ဝယ်သည့်အခါ ဦး ဆုံးစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်ကိုဝယ်မည်၊ ငှားမည်၊ ဆောက်လုပ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်စဉ်းစားသင့်သည့်အရာအချို့ဖြစ်သည်။
ဇြန္လ 4, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 မာရီနီ	မှတ်ချက် Leave
လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း Search Engine Optimization သည်ဒစ်ဂျစ်တယ် B2C စျေးကွက်၏အဓိကမဏ္oneိုင်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အရ မကြာသေးမီကစစ်တမ်းတစ်ခုSEO သည်အော်ဂဲနစ်လူမှုမီဒီယာများထက် ၁၀၀၀% + ပိုမိုသောလမ်းကြောင်းကိုမောင်းနှင်နိုင်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာအားလုံး၏ ၅၃.၃% သည် Google နှင့် Bing ကဲ့သို့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှလာသည်။
ဤနံပါတ်များသည် B2C ကဏ္inတွင်ရရှိသော SEO လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတိုင်းအတာနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြသသည်။
ဇြန္လ 4, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 ဒေးဗစ်ဂျက်ဆင်၊ MBA	မှတ်ချက် Leave
နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများသည်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများနည်းတူ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်မတူပါ။ သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာနောက်ခံစစ်ဆေးမှုဝန်ဆောင်မှုဟုလူသိများသောပရိုဂရမ်များဖြစ်သောအများပြည်သူဆိုင်ရာမှတ်တမ်း site ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
GoLookUp သည်များစွာသောအချက်အလက်များ၏အချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏ဒေတာဘေ့စ်ထဲသို့စုဆောင်းပြီးသန်းနှင့်ချီသောအများဆိုင်မှတ်တမ်းများမှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်။ သူတို့၏နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများသည်အမှန်ပင်စေ့စပ်သေချာပါသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 4, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 Sheryl Wright	မှတ်ချက် Leave
သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါသင်၏အန္တိမရည်မှန်းချက်သည်၎င်းကိုကြီးထွားစေရန်နှင့်သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သောအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကိုအောင်မြင်ရန်ဒိုင်းနမစ်များစွာပါဝင်ပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအောင်မြင်စွာကြီးထွားစေရန်သင်နှင့်သူတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်လိုသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားရန်အတွက်စားသုံးသူများယုံကြည်စိတ်ချရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုယုံကြည်စိတ်ချရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 4, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
စာရင်းကိုင်များသည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသည့်အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်ထပ်မံလိုအပ်နေသေးလားဟုသင်တွေးမိလိမ့်မည်။ သို့သော်ဝမ်းသာစရာမှာ၊ စာရင်းအင်းသည်မကြာမီကုန်တော့မည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သင် ၀ င်ရောက်ရန်အတွက်အလွန်အကျိုးရှိသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ သင်စာရင်းကိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်အဘို့အလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ငါးခုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဇွန်လ ၇ ရက်သည် National CAPHPACH Day ဖြစ်သည်
ဇြန္လ 3, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 MTFMove Day® PR	မှတ်ချက် Leave
VTHSGRL လူတိုင်းလိုပဲရဲအရာရှိတွေမှာလုပ်စရာအလုပ်ရှိတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အားလုံးကြားဖူးသည်၊ အထူးသဖြင့်မကြာသေးမီအချိန်ကနိုင်ငံသားများသည်ရဲများ၏နှောက်ယှက်မှုကိုတောင်းဆိုနေသည်။ အလားတူပင်ရဲများကနိုင်ငံသားများ၏အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းသည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေသည်။ ကောင်းပြီ, ယခုဤအဘို့မျှော်လင့်ချက်ဆေးတစ်လက်ရှိပါတယ်! နှစ်စဉ်ဇွန် ၇ ရက်ကိုကျင်းပသည့် National CAPHPACH Day သို့မဟုတ် #CAPHPACH Day (အသံထွက် cap ° pack) သည်ရဲများနှင့်နိုင်ငံသားများအကြားအပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်နိုင်ငံသားများအားရဲတပ်ဖွဲ့၏နှောက်ယှက်မှုနှင့်ရဲများ၏နှောက်ယှက်မှုနှစ်ခုလုံးအားအမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမြင်မြှင့်တင်ခြင်းနေ့ဖြစ်သည်။ ရဲရှိရာရဲ။
12... 65 ပို့စ်အဟောင်းများ